हामी एन आर एन हाम्रो एन आर एन !! हाम्रो लक्ष्य हाम्रो सपना समृद्ध नेपाल यही जुनीमा हेर्ने चाहना ! – Complete Nepali News Portal
May 20, 2017	463 Views
हामी एन आर एन हाम्रो एन आर एन
हाम्रो लक्ष्य हाम्रो सपना समृद्ध नेपाल यही जुनीमा हेर्ने चाहना । लाप्राक नमुना बस्ती प्रति अध्यक्ष घले, जमुना भाउजु, श्याम तामाङ्ग, पत्रकार भाई राजेन्द्र भट्ट अनि म हामी त भयौ । एन आर एन लाप्राक हाम्रो लक्ष्य । बिचरा सुरेश चित्रकार न उनी एन आर एन हुन न उनलाई कर नै छ तरपनि हाम्रो यात्रामा हामी संगसंगै खटेका छन । यस पटकको लाप्राक यात्रा अर्को एउटा अविस्मरणीय क्षण बन्यो। बादलले आकाशलाई ढाकेपछि हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि अध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा मेरै ल्याण्ड रोभरमा र एन आर एन ए को बोलेरोमा सडक मार्ग हुदै लाप्राक पुग्ने निर्णय ग–यौ । त्यो त्यति सहज थिएन तर पनि हामी काठमाण्डौको ट्राफिकलाई स्विकार्दै थानकोटको बाटो हुदै हामी मुग्लीन पार गर्दै लाप्राक तिर लाग्यौ ।
कच्ची बाटो झन त्यस माथी अध्ंयारो हामीलाई आजै जसरी नी लाप्राक पुग्नु नै थियो । अध्ंयारो त्यस माथी झन पानि परिदियो हामी बाध्य भएर बाटो मै बास बस्यौ । मलाई त केही थिएन मेरो चिन्ता थियो अध्यक्ष घले दम्पतीको बिना कुनै गुनासो त्यो सानो घर सानो कोठामा रात बिताए । अनि मनले सोचे किन सबै अध्यक्ष घले र जमुना गुरुङ्ग जस्तै सफल हुन सकेनन् । बिहान सबेरै करिब ६ बजे हामीले फेरी यात्रा शुरु ग–यौ । बाटो त्यति सजिलो थिएन रात भरिको पानिले बाटोको अस्तित्व नै मेटाउन कोशिस गरि रहेको थियो । एक मनले बाटो मै यात्रा रोकेर फर्किउ फर्किउ भनि रहेको थियो । अर्को मनले घले दम्पतीको लाप्राक पुग्ने बेग्र चाहनाले मैले मनको कुरा निकाल्नै सकिन । मौनताका साथ उँहाहरुको लगाव प्रति गर्व पनि गर्दै थिए म पनि एउटा सहयात्री हुन पाएकोमा । जति जति हामी अगाडि बढदै थियौ बाटोहरु त्यति नै तर्साउदै थिए । राङरुङ्ग खोला पार गरे पछि त के कुरा गर्नु ।
अब फर्किनु पर्छ भन्छु भनेर मन दरो पारेर अगाडि पुगेको त गाडी जान नसके हिडेर भएपनि जाउ भन्ने भाउजुको अभिप्राय बुझेपछि म बिचरा शब्द नै निस्केन । बाटोमा आएको पहिरो, पानिले पारेको ध्वस्तमा एन आर एन को बोलेरो जिप (लुट) सिनेमाको उध्रेको चोलीमा सुस्मा कार्कीको कम्मर झै लचकि रहेको थियो । म मात्र होईन हाम्रो पुरै टिमले बाटोमा ढुङ्गा ओछ्याउने, धकेल्ने हुन सक्ने सम्म सबै ग–यौ । केहि सिप लागेन अब बोलेरो जान नसक्ने निश्चित भयो । अब पालो मेरो प्यारो मुटु मेरी पे्रमिका ल्याण्ड रोभरले कम्मर हल्लाउदा भने सुष्मा कार्की होईन मेरीे हजुरआमा याद आयो । बिचरी मेरी हजुरआमा दमले सास फुल्दा जुन पिडा बोध मैले गर्थे मेरो प्यारो जिपलाई पनि त्यस्तै भयो होला ।
के गर्नु मान्छे भए बोल्थ्यो होला मेशिन न प–यो । तर यात्रा अझै सजिलो कहां थियो र ? कति पटक ओर्लनु कति पटक चढनु अनि हिलोमा चिप्लेर कति पटक नाच्नु बाटो माथिको भिर हे–यो अहिले खसेर छोप्ला जस्तो । त्यति डराउने त म पनि होईन तर चिन्ता थियो घले दम्पतिद्वयको कति पटक कोशिस गरे फर्किउ भन्नलाई तर उंहाको आखांमा विश्वास देखेर सोझो सोनाम पाराले मुसुस्क हासेर मनको कुरा मन मै राखे । मुश्किलले बारपाक पुग्यौ । भोक पनि लागेकै थियो मलाई मात्र होईन अरु साथीहरुलाई पनि श्याम तामाङ्गले बारपाकमा खाजा खाउ भन्दै मात्र के थिए भाउजुले अब लाप्राक पुगरै खाने भने पछि म फेरि सोनाम पाराले मुसुस्क हासे अनि दायां बायांका साथीहरुको अनुहार पनि डर र भोकमा मिश्रित थियो ।
झन त्यस माथि हामी सबै भन्दा छिटो डराउने पत्रकार राजेन्द्र भाईको त के कुरा गर्नु हुने भए फेसबुक लाइभ नै गरि दिन्थे तर नेट नै थिएन । मुश्किलले पहिरो भिर पार गर्दै लाप्राक पुग्यौ । अब त भोकले रनथनिएको पेटले केहि राहत पाउने भयो भनेर मख्ख परेको घले दम्पपतीद्वय खानेकुराको नाम लिनु त परै जाओस् पुग्ने बितिकै काममा खटिए । हामी बांकी टिम एकले अर्काको मुख हेरौ अनि अध्यक्ष घले संगै काममा लाग्यौ । मन मनले भने त्यसै घले दम्पति सफल भएका होईन रहेछन । सफल हुन त थुप्रै चिज बिर्सनु पो पर्दाे रहेछ । नत्र हरेक विदेश जाने दम्पति घले दम्पति जस्तै सफल भई हाल्थे नि ।